Visa & Kaadị - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Chọtara ma ọ bụrụ na ịchọrọ visa
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmụ na BLI ruo ogologo oge karịa ọnwa isii, e nwere akwụkwọ abụọ ị ga - enwerịrị: ikikere Ọmụmụ Canada na CQ (Akwụkwọ Nkwenye nke Quebec). Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ị ga-etinyerịrị maka CQ mbụ. Mgbe ịchọtachara CQ gị (3-6 izu n'ozuzu), ị nwere ike ịmalite usoro nke inweta ikikere akwụkwọ ọmụmụ Canada.
Ihe dị mkpa: Ma ndị ọchịchị Quebec na nke Canada na-enye ikike ndị nkuzi maka ụmụ akwụkwọ ụwa naanị mgbe a kwadoro ha na usoro a ghọtara na oge zuru oke. Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.